မြန်မာ့သတင်း ကမ္ဘာ့သတင်း | Saffron People's Movement
Saffron People’s Movement	Home
SAFFRON NEWS LETTER
March 14, 2011 in သတင်းပဒေသာ	ဓာတ်ပုံ Reuters
ဂျပန် နျူကလီးယား စိုးရိမ်မှုကြောင့် ၂၀၀,၀၀၀ နီးပါး ဘေးလွတ်ရာ တိမ်းရှောင် ဂျပန်နိုင်ငံက နျူကလီးယား ရေဒီယို သတ္တိကြွဓာတ် ပျံ့နှံ့မှာကို စိုးရိမ်ကြတဲ့ နိုင်ငံသား ၁၇၀,၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်သွားနေကြပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံ | နားဆင်ရန် ထိပ်တန်းသတင်းများ
လစ်ဗျားသူပုန်တွေ အရှေ့ခြမ်း မြို့တမြို့ ဆုံးရှုံး ၂၀၁၁ နှောင်းပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ်လို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကြေညာ ဂျပန်ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီကြောင့် သေဆုံးသူ သောင်းဂဏန်းအထိ ရှိနိုင် ဧရာဝတီ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ် တိုက်ခိုက်ခံရ အတိုက်အခံ နောက်တမြို့ လစ်ဗျားအစိုးရတပ် သိမ်းပိုက် ဂျပန်ကပ်ဘေးနဲ့ နျူကလီးယား အရေးပေါ်အခြေအနေ လေယာဉ်မပျံသန်းရဇုန် သတ်မှတ်ရေး အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံ ပြည်နယ်ပြည်မ တန်းတူရေး၊ NLD ရှင်းပြ နျူကလီးယားစက်ရုံပေါက်ကွဲမှု ဂျပန်အရေးပေါ်ကြေညာ ဇာဂနာလွတ်မြောက်ရေး နိုင်ငံတကာလူရွှင်တော်တွေ တောင်းဆို ဘလတ္တာ နေပြည်တော် သွားမည်
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (FIFA) ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ဆတ် ဘလတ္တာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင် ခရီးအဖြစ် မနက်ဖြန် နေ့လယ်တွင် မန္တလေးမြို့ တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့
ဂျပန်ရှိ မြန်မာများ သဘာဝ ဘေးဒဏ် စိုးရိမ်ဆဲ
အင်အားပြင်း ငလျင်နှင့် ဆူနာမီဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားများက သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ထပ်မံ ဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်နေပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား
စက်မှုဇုန် လောင်းကစားဝိုင်းများ စည်ကား
ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ပရဝဏ်၌ လောင်းကစား ၀ိုင်းမျိုးစုံတို့ နေ့၊ ညမပြတ် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။အထူးသဖြင့် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်များ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး နိုင်ရေးအတွက် ၀င်ငွေရရှိသည့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပညာများ သင်ကြားနိုင်မည့် အစီအစဉ် ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ဂီရိ ကူညီရေး ဆက်လုပ်မည်
ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD) က ဦးစီး၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ဂီရိမုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် လူထုအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း လေယာဉ်ခ ဈေးတက်မည်
ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီဈေး မြင့်တက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲနေသည့် Thai Airways International လေကြောင်းလိုင်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးစဉ် လေယာဉ် လက်မှတ်နှုန်းထားများ
ဂျပန်ကို ဆူနာမီ ရိုက်ခတ်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များ
ယနေ့ ဆူနာမီဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဂျပန် အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာလုပ်သားများ အလုပ် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိနေပြီး တိုကျိုမြို့တွင် မြန်မာ ၂ သောင်းကျော် ရှိကြောင်း
နိုင်ငံ့ဥသျှောင်ဥက္ကဋ္ဌ စစ်တပ်ကို တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မည်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် နိုင်ငံ့ဥသျှောင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးဖြင့် တပ်မတော်ကို တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ရာထူးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
စီရင်မထားသည့် ပြစ်ဒဏ် အပေးခံရသူများ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့အစွန်ရှိ ကျောင်းသားဆေးခန်းလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ရဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်း ပရ၀ုဏ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကို ရှောင်တိမ်ရင်း
ရွှေဒကာ မင်းတြားကြီးရဲ့ ရွှေယတြာ
ဦးရုက္ခစိုး၊ ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ်တို့ မြန်မာပြည့်အနှံ့ ဘုရားဖူးရန် ခရီးထွက်လာကြသည်။ရုက္ခစိုး။ ။ ငါလည်း မင်းတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး ပေါက်ကရ ရှစ်ဆယ် လိုက်လုပ်နေရတာနဲ့ တရားထိုင်တဲ့ အလုပ်လည်း ပျက်တာ ကြာပြီ။
နောင်တခေတ်ရဲ့ အောင်စစ်သည်များအတွက် သင်ခန်းစာ
အမိ စစ်တက္ကသိုလ်ကြီးကို ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျနော်တို့ ဗိုလ်လောင်းအသစ်တွေကို ကြိုဆိုပွဲဆိုပြီး စီနီယာ ဗိုလ်လောင်းတွေက စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ကျနော်တို့ကို ပြောကြပါတယ်။ ကြိုဆိုပွဲ
ကိုမြအေး သားကြီး(AAPP) မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၁
စ ဆုံဖူးတာက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ စတည်တဲ့ ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများ သမဂ္ဂမှာ၊ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးထဲမှာ သူက တက်တက်ကြွကြွ။ နောက်တော့ မောင်ထော်လေးလမ်းထဲက ဂေါ်ဇဒါ (GOSDA) လို့ အလွယ် ခေါ်ကြတဲ့ ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသားတွေ ဆုံရပ်မှာပေါ့- နောက်ပိုင်း စုစုဝေးဝေး ပြန်ဆုံကြတော့ ၁၉၉၀ ဧပြီ အင်းစိန်ထောင် ၅ ဆောင်မှာ။
မစ်ရှီဂန်က ပေးတဲ့စာ(၅၈) အောင်ဝေး မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၁
(photo: Pan-African News Wire)
“—-Earthquake ကို မြေငလျင်လို့ ဘာသာပြန်ရင်၊ Youth-quake ကိုတော့ လူငယ်ငလျင်လို့ အကြမ်းဖျင်း ဘာသာပြန်ရမှာပဲ—-”
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ မတ်လ ၁၃ ရက် နိုင်ငံတကာမြန်မာမိသားစုများ ကျင်းပ
မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၁
မြန်မာပြည်၏ မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ကျရောက်သော လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် မြန်မာနြိုင်ငံ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ ကျင်းပကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် အချို့ရှိ မြန်မာမိသားစုများ၊ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများကလည်း အခမ်းအနားများ ကျင်းပကြရာ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရှိ BADA အဖွဲ့၊ နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘတ်ဖဲလိုးမြို့ရှိ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ West Virginia ပြည်နယ်၊ Moore Field ရှိ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူများ ၏ အခမ်းအနားလှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများကို တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
မဏ္ဍာပ် မထိုးရ၊ လူ မစုရ၊ စားမြိန်ထုတ် မထည့်လိုက်ရ၊ ရေအိုး မခွဲလိုက်ရ
မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၁ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ မတ်လ အရေးအခင်းတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သော ကိုဖုန်းမော်၊ ပဉ္စမနှစ် (ဓာတု) ၏ အမကြီး မမာမာဝင်း၊ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသော ကိုခင်မောင်ထွန်း (B.Sc. Hist) ၊ မဝင်းဝင်းမြင့် (B.Sc. Phy)၊ ကိုမင်းထွဋ် III Yr Zoo တို့နှင့် စက်မှုအားမာန် စာစောင်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ကျန်ရစ်သူများ၏ ခံစားချက်များအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဦးစွာ ကိုဖုန်းမော်၏ မိသားစု အတွင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းကြည့်ရာ မိဘများမှာ ဦးဩဘာနှင့် အဒေါ်အမာ ဖြစ်၍ ကွယ်လွန်သွားကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း။ မောင်နှမ ငါးဦးအနက် စတုတ္ထမြောက် သားဖြစ်ကြောင်း၊ မမာမာဝင်း က ပြောပါသည်။ အကိုကြီး ကိုကျော်ဝင်းနှင့် အမနှစ်ယောက်ဖြစ်သော မမာမာဝင်းနှင့် မမာမာအိတို့က မင်္ဂလာဈေးတွင် ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ကိုဖုန်းမော်နှင့် ညီမငယ် မနီနီအောင် (ဒုနှစ်၊ ဓာတု-လှိုင်) တို့ကို မိဘသဖွယ် ပညာရေးကို တာဝန်ယူ အုပ်ထိန်းနေရကြောင်း ပြောပါသည်။
ပြိုးပြက်ကြွားဝင့် … ပွင့်သွားတဲ့တည …။
လရောင်ပြာနဲ့အတူ … ဖြူနုဝင်းဝါလို့ …။
ဆယ်နှစ်လည်း ပြည့်ခဲ့ပြီ . . . တစ်သိန်းလည်း ပြည့်တော့မည်
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ မိတ်ဆွေရန်သူမရွေး၊ ၇ ရက်သားသမီးတို့၏ နာရေးကိစ္စအဝဝတို့ကို မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဟူသော ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ထား၍ (အခမဲ့) ကုသိုလ်ဖြစ် အအေးခန်း ထားပေးခြင်း၊ မီးသင်္ဂြိုဟ်ပေးခြင်းတို့ကို အလူမီနီယမ်ခေါင်း၊ မှန်ခေါင်း၊ ရဟန်းသံဃာတော်များအား စတီးလ်ကရဝိတ်ဖောင်၊ မှန်စီရွှေချခေါင်းများဖြင့် ကုသိုလ်ပြုလုပ်ငန်းများကို ပေးဆပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဆယ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အပြည့်အစုံသို့ …
အမေရိကန်၊ လပ်ဗေးဂတ်စ်မြို့က မြန်မာကွန်မြူနီတီက မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေပွဲနှင့် အလှူခံမည်
ဖိတ်စာနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို သည်မှာ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
ရန်ကုန် လေပြင်းတိုက်၊ ၇၆၀ အိုးအိမ်မဲ့
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ် ၃ ခုတွင် သောကြာနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လေပြင်းတိုက်ခဲ့ရာ …
မေးခွန်းပါ အကြောင်းအရာကို အမတ်များ မပိုင်နိုင်
လွှတ်တော်များသို့ အမတ်များ တင်ပြသည့် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများသည် အကြောင်းအရာ …
ကချင် မြောက်ဖျား စစ်တပ်တိုးချ
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားစွန်း မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ပူတာအိုဘက်သို့ …
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရက်ပိုင်း၌ မီးမလာသဖြင့် မြို့ခံကျောင်းသားများ ဆူပူမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး …
ထားဝယ် စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းက ဘယ်သူ့အတွက် အကျိုးရှိမှာလဲ
(ဆောင်းပါး) မြန်မာပြည်သူများက ဒါမျိုးကြားဖူးလှပြီ။ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် …
more more more more more more more 2011-03-13
မြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးနေ့ ပြည်တွင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုတွေရှိ
စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်နဲ့ ကိုစိုးနိုင်တို့ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်ပြည့်အဖြစ် ဒီနေ့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မနက်မှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ ဆွမ်းကျွေးအလှူဒါန ပြုလုပ်ခဲ့ကြသလို ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကျောင်းသားတွေကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ အနက်ရောင် လှုပ်ရှားမှုတခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဧရာဝတီ အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း နောက်တကြိမ် တိုက်ခိုက်ခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဧရာဝတီ အင်တာနက် သတင်းမဂ္ဂဇင်း ဝက်ဆိုက် ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါ မသိရသူတွေက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပေါ်လစီဆောင်းပါး ရေးမယ့်လူငယ်တွေ စုဆောင်းနေ
စစ်အစိုးရ စာပေစိစစ်ရေးဟာသူတို့ စိတ်ကြိုက် ပေါ်လစီဆောင်းပါး ရေးပေးမယ့် လူငယ်တွေ လိုက်လံ စုဆောင်းနေတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ စာပေအသိုင်းအဝိုင်း အဆိုအရ သိရပါတယ်။
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် မြေယာသိမ်းဆည်း
တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်း ထားဝယ် မြို့နယ်မှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို စတင်နေရာမှာ အခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဒေသခံတွေရဲ့ ရာဘာခြံနဲ့ သီဟိုဠ်ခြံ ဧက ၃ ရာကျော် ကို အာဏာပိုင်တွေက သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေးနဲ့ စစ်ကိုင်းမြို့အကြား ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း အခုနှစ် သဲသောင်တွေ ထွန်းခဲ့တဲ့အတွက် မြစ်ကြောင်း တိမ်ကောပြီး ရေပြင် အကျယ် ပေ ၁၅ဝ လောက်သာ ကျန်တော့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကိုဖုန်းမော်နေ့ အခမ်းအနား နယ်သာလန်မှာ ကျင်းပ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်က ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ် ဆန္ဒပြမှုမှာ အစိုးရက ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုဖုန်းမော်နဲ့ ကိုစိုးနိုင်တို့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနားကို နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက် လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂျပန်ငလျင်အတွက် NLD သဝဏ်လွှာပို့
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် အသက်အိုးအိမ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေ အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာတစောင်ကို NLD အဖွဲ့ဝင် အားလုံးကိုယ်စား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးထံ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
OUR LOGO	"တပ်မတော် အပေါ်မှာ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း ကလွဲပြီး ဘယ်လိုမှ သဘော မထားပါဘူး။ အဲဒီ အစွဲဟာ ဒီတပ်မတော်ဟာ ကျမ ဖေဖေ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်နေတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်"
လာလည်ကြသူများ	hidden hit counter
ဘယ်နိုင်ငံက လာကြသလဲ	counter
ပါဝင်သော ကဏ္ဍများ	ကဗျာ
Burma's News World News
Recent Posts	၀ါရင့် နိုင်ငံရေး သမားကြီးများ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားပြု အမြင် သဘောထား (စိုင်းစောအောင် SNLD)
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာကြောင့် မဝင်ခဲ့သလဲ (ဖြိုးမင်းသိန်း)
မြန်မာအလုပ်သမားများ တင်ပို့သည့် ထိုင်းရဲကားအား နယ်ခြားစောင့်တပ်က စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင်ဖမ်းဆီး
Email ကနေ ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်းရချင်ရင် Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.
Recent Comments	Gon Gar La on စည်ပင်ထွန်းကားနေတဲ့ ခေတ်သစ်ကျွ…steven on မြန်မာ့ သတင်း ကမ္ဘာ့ သတင်းскачать браузер goog… on Burma’s News World…Лучший Софт для Wind… on Burma’s News World…crazy warez on Burma’s News World…	Menu စာအုပ်စင်
« NLD ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အမှတ် ၅/ ၃/၂၀၁၁
စတုဒီသာ သံဃာ မြန်မာအဖွဲ့ က ဂျပန်ဆူနာမီ ဒုက္ခသည်များအား ဘတ်တစ်သိန်း လှူဒါန်း »